Vibratory Polishing Machine Factory - China Vibratory Polishing Machine mpanamboatra, mpamatsy
Masinina famaranana Vibratory miaraka amin'ny rakotra tabataba maimaimpoana
Fampiharana & tombony
Ny rafitra famaranana Vibratory dia miteraka hetsika fanapahana amin'ny alàlan'ny fanetsiketsehana ny sambo fanodinana (ny fantsona famaranana) amin'ny hafainganam-pandeha,
ka mahatonga ny haino aman-jery lavo hifandona. Ity hetsika fanosotra ity dia mametaka tsara ireo faritra hanala ireo burrs.
Zana-kazo misy lanjany mivezivezy eccentric napetraka eo amin'ny fantsona dia miteraka fihetsehana mihozongozona.
Ny milina fanodinana vibratory sy ny rafitra famaranana dia miteraka hetsika fanapahana izay tena feno tokoa.
Izy ireo dia manala fitaovana avy any am-paosiny sy any amin'ny toeram-pialan-tsasatra ary ao anaty ati-doha, izay tsy azo atao anaty barika
noho izany dia azo ampiasaina amin'ny faritra marefo na be pitsiny izy ireo. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta sy tapaka lalan-dra fohy,
izy ireo koa dia afaka mihazakazaka ampahany lehibe tsy misy simba. Ny elatry ny elatra lehibe sy ny fiantsonana miantsona dia matetika mandeha ao amin'ireo rafitra ireo.
Ny rafitra famaranana Vibratory koa dia manome ny tenany ho mandeha mora foana.
Izy ireo dia afaka mandeha ho azy tanteraka ho an'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fivezivezena na ampiasaina ho toy ny asa andiany voalohany.
Ny hetsika dia ny boriborintany kely haingam-pandeha ary mahery vaika tokoa nefa nefa tsy dia miteraka fihenjanana kely amin'ireo faritra
Modely samihafa & Techincal
MODELY fahafahana Herin'aratra
Haingam-pandeha PU Lanja (kilao) Size (L×W×H) mm
Holdwin Surface fitsaboana vibratory famaranana lovia milina tsy misy tabataba
Fanamainana afovoany indostrialy • fanamainana fanalefahana rivotra mafana
Ny fanamainana afovoan-drivotra mafana dia ampiasaina mba hiantohana ireo faritra tsy misy tasy sy tsy harafesina maina, aorian'ny fanodinana faobe,
izay tena zava-dehibe ho an'ny faritra hoso-doko ho fandidiana farany, mety indrindra amin'ny fanodinana ampahany kely.
Fanamainana amin'ny rivotra mafana sy ny rongony
Sobika afovoany anatiny vita amin'ny vy tsy misy fangarony, misy rano nesorina tamin'ny haben'ny faritra tamin'ny alàlan'ny hery centrifugal izay mampitombo ny fahombiazan'ny asa.
Ny rivotra mafana dia mampihena ny fotoana maina ary manala ny hamandoana ary miaro ny ampahany amin'ny harafesina sy ny harafesina.
Fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha miovaova ho an'ny safidy hafa.
Miaro ny herinaratra mandeha ho azy ny fitaovana arovana rehefa vita ny fikarakarana na nosokafana ny fonony.
HOLDWIN Industrial centrifugal Dehydrator fanamainana masinina manala menaka 70L
Dewaterer Centrifugal indostrialy
dia ampiasaina mba hiantohana ny faritra tsy misy tasy sy ny harafesina maina, aorian'ny fanodinana massfinishing mando, izay tena zava-dehibe ho an'ireo faritra hoso-doko ho fandidiana farany
mety indrindra amin'ny fanodinana ampahany kely.
Fanamainana amin'ny rivotra mafana sy ny rongony. Harona afovoany anatiny vita amin'ny vy tsy misy fangarony,
ny rano nesorina tamin'ny velaran'ny faritra tamin'ny alàlan'ny hery sentra izay mampitombo ny fahombiazan'ny asa.
Polisy mikoriana mandeha ho azy
Ny polera dia azo ampiasaina betsaka amin'ny indostria isan-karazany amin'ny metaly, ireo fitaovana tsy metaly izay manaparitaka ireo faritra nohomboana
milina fanoratana, fanariana sy fanaovana hosoka, h
mihinana fitsaboana sy faritra hafa, chamfering, decaling, polishing ary dingana hafa.
Indrindra ho an'ny endrika sarotra, manafina ny hoditr'omby matevina ary ny ampahany kely no manome fitaovana fanodinana tsara indrindra.
Masinina famolavolana Rotary mandeha ho azy miaraka amin'ny Separator
1. Vortex polisher amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny onja vortex tany am-boalohany, ny workpiece ary ny vato fikosoham-bary hahatratra ny fikororohana haingana, ny fahombiazan'ny hazavana avo lenta, hanatsara ny fahombiazan'ny 15-30 fotoana.
2. Vortex polisher turntable motera ho an'ny motera, mety mila mifidy ny hafainganam-pandeha miantso; timer miaraka amin'ny fampisehoana nomerika, mora ampiasaina, dia afaka mahita hatrany ny toe-javatra iainana.
3. Vortex polisher turntable raikitra tanky ary nilahatra tamin'ny polyurethane fingotra, ary ny elanelana misy eo amin'ny turntable azo ovaina, mitafy fanoherana sy ny asa fanompoana lava.
Milina fanamafisam-peo vita amin'ny vy mandeha ho azy
Ny haben'ny fahaizany dia azo zaraina ho 150 litatra, 300 litatra ary 600 litatra misy famaritana marobe Ho an'ny vy vy, vy, varahina, zinc, aliminioma,
firaka magnesioma sy fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny fanidiana, fanariana, fanariana, fisolokiana, tariby, seramika, jade, vatohara, resins sentetika, plastika,
keramika sy zavatra hafa vita amin'ny tany polishing, chamfering, esory ny burrs, harafesina, fikosoham-bolo, fikosoham-bolo, famolavolana gloss, fandefasana sary mihetsika mainty, fitotoana mainty sy tsara, famolahana chamfering
Masinina famolavolana Rotary mandeha ho azy
Mety ho an'ny asa kely fanaovana fikosoham-bolo avo lenta sy fanaovana poloney, afaka manala haingana ilay chamfer,
milalao fikosoham-burr sy polishing, mety koa amin'ny fanesorana flash silica gel.
1 、 Entin'ny motera marindrano
2, ny rafitra fametahana uick dia mamela ny fiovan'ny efijery haingana.
Ny efijery 3 place azo alaina dia azo vita amin'ny vy tsy misy fangarony izay maharitra sy tsy miovaova na mifono miaraka amin'i PU mba hanafoanana ny abrasion.
milina fanodinana vibro ultrasonic
Ny fampiharana ny milina vibratory dia fanodinana ampahany amin'ny metaly, metaly tsy ferrous ary tsy metaly. Ankoatr'izay,
ny injeniera dia mampiasa ny fizotrany amin'ny fanesorana ny burr sy ny harafesina, ny faritry ny vy amin'ny famolahana sy ny poloney fitaratra. Ankoatry ny,
Ity fizotrany ity dia malaza indrindra amin'ny fandefasana ampahany amin'ny faritra misy geometrika sarotra sy ambonin-javatra lava.
Aorian'ny fanodinana dia tsy misy fahasimbana amin'ny faritra amboniny ary tsy misy fiatraikany amin'ny refin'ny ampahany.
Ary koa, ny fahamendrehan'ny faritra dia afaka manatsara ny degre 1-2. Ny milina Vibratory dia mety hamita ampahany kely ka hatramin'ny antonony amin'ny habetsahan'ny andiany lehibe kokoa.
√ Fizahana madiodio fantsona fanodinana.
√ Ampidiro amin'ny tanana ny vavahady fisarahana azo atao na ny safidy fisarahana mampivadika pneumatically.
√ Fandidiana mora sy mihena ny vidin'ny asa
√ Ny lanjan'ny tsy fifandanjana azo ovaina dia mamela ny hamafin'ny famaranana samihafa.
√ Akanjo tsy mahazaka akanjo vita amin'ny PU avo lenta.
√ Ampidino ny media amin'ny alàlan'ny rano mandeha.
Masinina fandefasana Vibratory vato
Milina lava karazana Vibratory famaranana milina fampiharana: Radiusing, Deburring, Derusting, Surface malama, Degreasing, Fanadiovana alohan'ny fametahana na simia, famaranana, poloney Famaritana ara-teknika: Fahafahana modely (L) hatevin'ny rindrina (mm) lanja mavesatra (kg) Motor (kW) Haben'ny tub (mm) L × W refy ivelany (mm) L × W × H HST240 240 20 450 2 × 1.1 690 × 672 1880 × 880 × 920 HST500 500 22 1200 2 × 2.2 1310 × 672 2870 × 880 × 920 HST750 750 22 1600 2 × 5.0 2 ...
Masinina manosika manify ho an'ny faritra vy kely
Masinina poloney manapotipotika - mahatalanjona ny fivoahana ny ampahany madinidinika amin'ny vokatra poloney.
Fitsipika masinina manapotipotika: fitaovana vaovao ny milina fandefasana andriamby.
Fampiasana fiovana mahery vaika elektrômanetika avo lenta, fampirimana haino aman-jery kely (filaharam-by vy).
miteraka fikorianana haingam-pandeha, mihodina, mihozongozona ary mihetsika hafa.